Izicwangciso ezinokusetyenzwa zoNxibelelwano lweZiteshi zeOmni Martech Zone
Ulahlekelwa njani ngumthengi? Nika amava angangqinelaniyo, ungabahoyi, ubathumele izibonelelo ezingafanelekanga? Zonke izimvo ezintle. Abathengi bakho baya kutshintshela kwezinye iinkampani ukuze bafumane inkonzo ebhetele kubathengi, kwaye kule mihla abantu bathembele kuyo uphononongo lwe-Intanethi njengegama elitsha lomlomo.
Wenza njani Kugcina umthengi? Kwaye ungagcini ngokuzigcina, kodwa ukhuthaze ukuthembeka kwazo kuhlobo lwakho? Xa abathengi baziva bekhathalelwe yinkampani yakho, Baza kuchitha imali eninzi kunye nawe. Injongo kukubonelela ngokugqwesa kunye nokuhambelana kwenkonzo yabathengi, kuwo onke amaqonga eshishini lakho.
Kodwa ii-CEO kunye nabaphathi beNtengiso bayazi ukuba kulula ukuyithetha le kunokwenziwa. Udinga izixhobo zokukunceda ubonelele ngohlobo lwenkonzo engaguqukiyo, ekumgangatho ophezulu eya kuqhuba ishishini lakho. Udinga Unxibelelwano lwe-Omni-channel; sisixhobo sanamhlanje esiqinisekisa amava angenamthungo kuyo yonke intsebenziswano yabathengi ukusukela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni.
Ukwakha ukuthembeka kwabaThengi kwiLizwe lanamhlanje le-E-Commerce
Wonke umntu osomashishini uyayiqonda into yokuba ukulawulwa kobudlelwane kuyinkohliso. Ukhuphiswano olunamandla lugcina uxinzelelo ekwakheni uphawu lwakho ukuze abathengi bachonge kulo kwaye batsaleleke kwibali lakho. Kukho iindlela ezithile zokukunceda wenze oku.
Sebenzisa unxibelelwano ngejelo le-Omni ukuya candelo abathengi bakho kwaye wakhe Imikhankaso yentengiso ekujoliswe kuyo kula macandelo. bandakanya abathengi bakho ngexesha elifanelekileyo ukuze bazive bebonwa kwaye bexabiswa yinkampani yakho.
1. Icandelo labaThengi bakho
Ukwahlulahlula abathengi bakho kwenza kubaluleke kakhulu amava okuthenga akhethekileyo kunokwenzeka. Xa uqhuba imikhankaso ethile yokuthengisa efanelekileyo, ungonyusa eyakho ixabiso lokuphila kwabathengi kwaye wakhe ukuthembeka. Kukho iindlela ezine ngokubanzi zokwahlulahlula abathengi bakho:
Inani labantu (ngoobani? Isini, ubudala, umvuzo)
I-Psychographic (ngoobani ngenene? ​​Uhlobo lomntu, udidi lwentlalo)
Ukuziphatha (iipateni zenkcitho, ukuthembeka kweempawu)
Nge-AI-automation esizisebenzelayo ungaya kwi-niche njengoko ufuna ngokwahlulahlulwa kwakho, kunye nokuqokelela idatha ebalulekileyo malunga nabathengi bakho kunye neendwendwe zesiza.
2. Lungiselela uLwazi kuNxibelelwano lwakho
Abathengi bafuna ukwazi ukuba babalulekile kuwe. Bafuna unxibelelwano lomntu ngamnye, kwaye uphando lubonisa ukuba bazimisele ukutshintshiselana ngedatha yabo yabucala.
Xa usebenzisa isixhobo sanamhlanje ukuqokelela idatha kwiindlela zokuthenga zabathengi kunye nokuziphatha, unokubonelela ngohlobo lwamava awenzelwe ngokwakho aya kuvuyisa abathengi bakho. Izicwangciso zibandakanya:
Ukubonelela ngexesha elinobuzaza liweyo xa iindwendwe zizama ukushiya isiza
Ukwenza ngokwezifiso ukunikezwa kwe-upsell ngokusekwe ekuziphatheni kokuthenga komthengi kunye nomdla
Ukunikezela ngaphezulu kwempahla yeenqwelo ezilahliweyo njengesikhumbuzo kumthengi wakho malunga nokuba bashiye phi
Kwaye zininzi ngakumbi ubuqili bobuqu. Uphuculo oluqhubekayo kwizixhobo zentengiso zesoftware lunokunceda ishishini lakho libonelele ngezona zisombululo zinamandla kwiimfuno zabathengi. Itekhnoloji ye-AI inokukunceda uqonde kwaye uqikelele indlela othenga ngayo, wabelane ngedatha, kwaye ufundise abathengi malunga negama lakho-ngokuqhubekekayo. Banike le nto bayifunayo phambi kokuba bayayicela!
3. Nxibelelana ngexesha elifanelekileyo
Nazi ezinye zeendlela onokuthi uzisebenzise ngokufanelekileyo iibhanile:
Ukwazisa…! Gqamisa ulwazi oluluncedo (njengoThutho lwaSimahla) kumzuzu ophambili kwinkqubo yokuthenga.
Ukuzalela. Inzala enkulu kwincwadana yeendaba yakho ye-imeyile okanye izaziso zokutyhala. Yenza abathengi bakho bafune ukuba 'kuLuhlu'.
Nyusa izibonda. Yongeza ukuthenga uxinzelelo ngokubonisa ukuba ngubani omnye ojongayo okanye othenga into efanayo ngoku.
Ukuxhobisa ukukhula ngoTeknoloji
Nge-AI-amandla omni-wesoftware yonxibelelwano yesoftware inkampani yakho inokwenza amava amnandi kumthengi. Iimpawu ezinje ngeMbono yaBathengi abaNye, iiNdawo ezineenkcukacha, kunye neeLayiti zeWebhu (ukugqunywa kwesiza) kunokunceda ekuphakamiseni iindlela zakho zokuthengisa.
Ukujonga kwabaThengi abangatshatanga
Akunakulinganiswa ukugcina umkhondo wakho konke ukuhlangana kwabathengi kumaqonga ohlukeneyo ngesandla. Ngonxibelelwano lwe-omni-channel, lonke unxibelelwano lwabathengi bakho luyalandelwa-nge-imeyile, kwifowuni, ngemidiya yoluntu, nakwiminyhadala yalapha-kwindawo enye.
The Ukujonga kwabaThengi abangatshatanga (okanye i-SCV) ibonisa iifayile zakho zedatha yomsebenzisi. Iprofayili nganye iqulethe imisebenzi yendawo yabathengi, ukhetho lwemveliso, imbali yokuthenga, nokunye okuninzi. Ukuba nayo yonke le datha ityebileyo kwimbono enye kuvumela ukwahlulwa okukhethekileyo kunye nentengiso ekujoliswe kuyo.
Qiniseka ukuba i-SCV yakho inikezela ubhetyebhetye, ukusasazeka, kunye nohlaziyo ngexesha langempela, ukuze uhlale unikezela ngamava abathengi afanelekileyo kunye noluncedo.
Xa kuziwa ekulawuleni amacebo akho okuthengisa ahlukeneyo, ukuzenzekelayo kubalulekile. Setha izinto zonxibelelwano ezisekwe kwimeko ebunjiweyo, kwaye uqinisekise ukubandakanyeka kwangexesha nabo bonke abathengi.
Nayi imizekelo emibini yokuzenzekelayo:
I-imeyile eyamkelekileyo kuye wonke umntu obhalisela uluhlu lwe-imeyile
I-webhook ekulumkisa ngalo lonke ixesha umntu engena kwivenkile yakho
Isicwangciso esiliQili sokuSebenza
Zonke ezi ngcinga kunye nemibono zilungile, kodwa masikhe sijonge nzulu kwaye sivavanye iindlela ezisebenzayo zokusebenzisa unxibelelwano lwe-omni-channel. Nazi izicwangciso ezintathu zokujonga:
1. I-imeyile efanelekileyo yokuThumela amaXesha
Ukuba udimazekile ziziphumo zakho zentengiso ze-imeyile, awuwedwa. Kodwa kukho indlela yokwandisa imizamo yakho apha ukuqinisekisa ukuba wenza konke onako.
Isicwangciso-qhinga: Cwangcisa i-imeyile ebangela ukuba ihambelane nomsitho othile, njengokuhanjiswa kwesaziso esithile sokutyhala. Ialgorithm izakuthumela ngokuzenzekelayo ezi imeyile kumzuzu olungileyo, ibuyise ngcono iirhafu ezivulekileyo ze-imeyile kunye nokubandakanya abathengi abafanelekileyo.
2. Phinda uvuselele iinqwelo ezilahliweyo
Ngo-2016, i-Business Insider yaqikelela ukuba 2.75 trillion Kwiinqwelo zokuthenga ezishiyiweyo kunokufunyanwa. Ngaba inkampani yakho iyakuxhamla kwisiqwengana soko?
Isicwangciso: Khumbuza abathengi bakho ngezinto abazishiye ngasemva nge-imeyile, ixesha elimalunga neyure emva konxibelelwano lwabo lokugqibela. Faka uluhlu lwezinto kwinqwelo yabo kunye nokubiza isenzo. Esi sisicwangciso esimbaxa ukuseta kodwa kufanelekile ukuba sibe neziphumo eziqinileyo, ezinokulinganiswa.
3. I-ROPO: Uphando kwi-Intanethi, Thenga ngaphandle kweintanethi
Ngentengiso ye-e-yorhwebo ekhulayo kunokuba nzima ukuyikholelwa loo nto Iipesenti ezingama-90 zentengiso yaseMelika isenzeka buqu. Kwiinkampani ezinendawo yokugcina iivenkile kunyanzelekile ukuba zidibanise umhlaba kunye nezitena nodaka ukuze kugcinwe kwaye kugxilwe kulwazi lwabathengi.
Icebo: Qalisa inkqubo yekhadi yokunyaniseka abathengi abanokuyisebenzisa kwiivenkile ezinxibelelanisa iprofayili kunye nedatha ekwi-intanethi. Ngoku ungadibanisa indlela abaziphethe ngayo kwi-Intanethi kunye nembali yokuthenga ngaphandle kweintanethi. Fumana iprofayili yomthengi epheleleyo ngakumbi, ibandakanye kwimikhankaso yakho yokuthengisa ekujolise kuyo, ucebise amava abo ngezibonelelo ezizodwa, kwaye ukhuthaze oko kubaluleke kakhulu ekunyanisekeni kwabathengi.
Kubalulekile kulo naliphi na ishishini ukuba lihlale lifanelekileyo, kwaye izixhobo zesoftware yokugcina inkampani yakho ngaphambi kwegophe ine-AI-enikwe amandla. Unxibelelwano lwejelo le-Omni likunika amandla okho abathengi bakho ngokwenza ubuqu, ukuzenzekelayo kunye nokuthengisa okujolise kuko. Vumela le ndlela inyuse ixabiso labo lobomi kunye nelakho.
tags: inqwelo yokuthenga eshiyiweyoukulahlwa kwenqweloukunyaniseka kwabathengiukuthumela amaxesha nge-imeyileIngcacisogeographyUkufika ngexesha lomyalezoomnichannelamava okuthenga akhethekileyoscvumbono womthengi omnyeqhinga
I-duet: Sebenzisa i-iPad yakho njengeLiso elongezelelweyo